नेप्से ४१.३६ अंकले बढ्यो, ६ अर्ब ६७ करोडको कारोबार – online arthik
नेप्से ४१.३६ अंकले बढ्यो, ६ अर्ब ६७ करोडको कारोबार
बुधबार, चैत्र ११, २०७७ | १५:५५:५८ |
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आज (बुधबार) दोहोरो अंकले बढेको छ । नेप्सेका अनुसार आज नेप्से ४१.३६ अंकले बढेर दुई हजार पाँच सय ७० दशमलब ३१ विन्दुमा पुगेको छ भने आज ६ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
आज कारोबार भएका एउटा समूहमध्ये हाइड्रोपावर बाहेक अन्यसबै समूहमा हरियाली छाएको छ । आज ९ कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक बृद्धि भएको छ ।
बुधवार १ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको बजारमा आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा बढेको छ । यो दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य १० प्रतिशत र बाँकी पाँच कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको हो । यस दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार १५५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १२ हजार ७०५ कायम भएको हो ।
बुधवार ९ प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य बढ्ने कम्पनीहरु जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड , आरएसडिसी लघुवित्त, माउण्टेन हाइड्रो नेपाल र कालिका पावर रहेका छन् । यस दिन जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३९७ रहेको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्सको ९ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ८९० , आरएसडिसी लघुवित्तको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९१८, माउण्टेन हाइड्रोको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. २६६ र कालिका पावरको ९ दशमलव ७६ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३१५ कायम भएको हो ।